Iska casil Compendium Blogware? | Martech Zone
Iska casil Compendium Blogware?
Sabtida, Juun 18, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Haa, waan jeclaan lahaa. Xaqiiqdii waan iska casilay Compendium Blogware. Waxay u egtahay wax aad u xun, miyaanay ahayn? Iscasilaaddu caadi ahaan waxay leedahay macno aan fiicnayn - laakiin xaaladdan maahan!
Dadka qaarkiis waxay u maleyn karaan Chris Baggott, Ali Sales oo anigu gebi ahaanba waxaan nahay nuts… maxaan u maleynayaa Isku-darka aan iska daayo Maxaan uga tagayaa shirkad laba jibbaareysa cabirkeeda sanadba sanadka ka dambeeya? Waan jeclahay Compendium iyaguna way i jecelyihiin… maxaa macno iigu samayn lahaa inaan is casilo?
Jawaabtu waa mid ka mid ah diirada iyo fursada.
In kastoo aan baxayo shaqada leh Compendium - kama tagayo Compendium Blogware. Xaqiiqdii, Compendium waa macmiilka ugu horreeya ee DK New Media, LLC - wakaaladayda cusub. Waxaan sidoo kale saami ku leeyahay Compendium - anigoo ku hawlanaa shirkadda tan iyo markii la aasaasay. Waxaan sii wadi doonaa si aan u hubiyo in Compendium uu guuleysto, sii wad in aan u mahadceliyo Chris iyo Ali si aad uhesho qaababka iyo xoojinta :). Waxaan sidoo kale bilaabayaa hay'ad ii gaar ah oo hoos timaada Compendium… waxbadan intaas kadib.
Furaha guushayda guusha ee Compendium ayaa ah in macaamiisha gabi ahaanba la siiyo dareenka ugu fiican iyo aqoonta la wareejiyo. Waxaan si dhow ula shaqeynayaa macaamiisheenna isgaarsiinta, guusha macmiilka iyo kooxaha iibka si aan u hubiyo in tani ay dhacdo - gacmahana la ii dhigayo illaa Diseembar.
Marka hore - aan ka hadalno diiradda.
Isku-darka waa shirkad tikniyoolajiyadeed, maahan shirkad adeeg. Awooda ay u leeyihiin inay koraan waxaa lagu gaadhay iyadoon indhaha laga saarin kubada, oo aan dhinac lagala socon ujeedadooda asaasiga ah ee ah inay noqoto barmaamijka ugu wanaagsan ee wax lagu qoro shirkadaha (iyo runtiina waa barta kaliya ee shirkadu ku shaqeyso) Chris, Cali iyo anigu waxaan dooneynaa in diiradaas ay sii socoto.
Barxadda iyo kaabayaasha - mahadnaqa aragtida Blake Matheny iyo kooxdiisa - ayaa ka wanaagsan kuwa kale oo aan abid arko. Shirkaddu waxay ku jirtaa xaalad ay si ballaaran u miisaamayso, iyada oo aan la helin laab-jeex iyo xanuun aad ka maqasho shirkadaha kale ee tikniyoolajiyadda. Waa waqtigii si ballaaran loo kobcin lahaa tirada macaamiisha doonaya inay ka faa'iideystaan ​​barxadda oo ay ka faa'iideystaan ​​waxyaabaha dabiiciga ah ee istiraatiijiyadaha suuq geynta.
Midda xigta waa Fursadda
Blogging iyo raadinta dabiiciga ah waa hal xabbad oo xujo aad u weyn ka weyn. Blogging, oo ay weheliso xeelado kale - warbaahinta bulshada, suuq geynta mashiinka raadinta, suuq geynta emaylka, adeegga macaamiisha, isgaarsiinta gudaha, fikirka hogaaminta, sumadda, ecommerce… waxay si xawli ah u kordhineysaa awooda warbaahinta iyo istiraatiijiyadda guud ee suuq geynta internetka. Macaamiisha Compendium Blogware waxay codsanayaan caawimaad ka baxsan teknolojiyadda - waxaana doonayaa inaan caawiyo.
Waxaan la shaqeynayay shirkadaha tobankii sano ee la soo dhaafay waxaan ka caawinayay istiraatiijiyaddan, kaligey iyo shirkadaha sida Gannett, Xaqiiqda, Wadada iyo Isku-darka - Webtrends, Koofiyadaha Indianapolis, Carhartt, Home Depot, Hotels.com, Icelandair, Tirerack, Cvent, RotoRooter, Eli Lilly, BlueLock, Xarumaha Xogta Nolosha,… Liistadu way sii socotaa
Chris, Cali iyo anigu waan aqoonsannay billo kahor. Fursadda loogu talagalay DK New Media si ay gacan cusub ugu noqoto macaamiisha Compendium iyo shirkadaha kale ee ka caawiya macaamiisha inay kordhiyaan maalgashiga ay ku samaynayaan baloogyada, warbaahinta bulshada, raadinta, emaylka, iwm. Waxaan si dhow ula shaqeynayaa Ali at Compendium si aan u horumariyo xirmooyinka macaamiisha, laga bilaabo Isdhexgalka Warbaahinta Bulshada, Naqshadeynta Wax-u-qabashada Naqshadeynta iyo barnaamijyada kormeerka, Naqshadeynta Blog iyo is-dhexgalka, La-tashiga Istaraatiijiyadeed ee Sannadlaha ah, iwm.
Doug Theis ka Xarumaha Xogta Nolosha wuxuu ila mid dhigay "CMO for Hire". Waan jeclahay taas, aqoontayda tikniyoolajiyaduna aad ayey ugu sii fideysaa. Xidhiidhka aan la leeyahay xirfadlayaal kale ayaa i siiya, maahan oo kaliya aqoonta, laakiin ilaha aan ku hubinayo inaan sidoo kale ka caawin karo shirkadaha inay horumariyaan xalalka ay sidoo kale u baahan yihiin Ma doonayo inaan noqdo la-taliyahaaga caadiga ah - inaad ku dhex socoto oo aan kuu sheego waxa aad u badan tahay inaad hore u taqaannay. Waxaan rabaa inaan noqdo lammaanahaaga oo waliba awood u leh fulinta istiraatiijiyadda iyo horumarinta xalka dhabta ah.
Waan la kulmay oo waxaan abuuray iskaashi aan rasmi ahayn Wareega Xiriirka Dadweynaha, Cadaadis la'aan Raadinta Bixinta, 4 Eeyaha Naqshadaynta loogu talagalay Magaca iyo Naqshadeynta, Doug Vann loogu talagalay Drupal, squish ee Joomla, Brandswag ee barashada warbaahinta bulshada, Noobie loogu talagalay Teknolojiyada iyo Waxbarashada Ganacsiga Yaryar, Kooxda Tacliinta ee Isticmaalka, Xalka BitWise Xalka, Mobilada isku xidha loogu talagalay Suuqgeynta Mobaylka, ProBlogService Istaraatijiyadaha Mawduuca, Kristian Andersen istaraatijiyadaha suuq geynta shirkadaha, Macluumaadka Walker istaraatijiyadaha Daacad u ahaanta Macaamiisha, dhismaha foomka internetkaQalabaynta List liistadu way socotaa!
Kuwani waa dad aan la soo shaqeeyay oo aan ku koray kalsooni aad u weyn tobankii sano ee la soo dhaafay. Waxay u fuliyaan macaamiisha waana kuwa ugu fiican horyaalkooda. Taasi macnaheedu maahan inaanan sidoo kale taageeri doonin shirkaddaada? Dabcan maya! Waxaan rabaa inaan kobciyo meheraddaada waadna iga caawin kartaa inaan kobciyo tayda. DK New Media, LLC. waxay bilaaban doontaa Ogosto 1, 2009! La soco!
10 Qodob oo Ka Maqan Bloggaaga
Jul 18, 2009 markay tahay 5:39 PM
Hambalyo Doug! Tani waxay umuuqataa in kani uu ahaa go'aan fudud. Waan ku faraxsanahay kobaca Compendiums! 😛
Jul 18, 2009 markay tahay 8:35 PM
Mahadsanid Joel! Dhamaan Indiana waa inay ku faraxsan yihiin koritaanka Compendium - waxay tusaale u noqonayaan ganacsiyada badan oo ay raacaan!
Jul 18, 2009 markay tahay 5:44 PM
Oh maya! Kama bixi kartid Compendium! Yaan ku garaacayaa samaynta caddayn, sheegasho suuq-geyn ah oo ku saabsan awooda farsamo ee sheyga hadda?
Waan kaftamayaa. Si kasta oo ay dhab u tahay, waxaan kuugu hambalyeynayaa qaadashada hadalka, Doug. Waxaan rajeynayaa inaan ku dhufto shirkaddiinnii ugu dambeysay (xitaa haddii kaliya aan kaa caawinayo inaad ka sii wanaajiso.) Laakiin waan hubaa inaan sii wadi doonno inaan waxyaalo waaweyn kaa aragno mustaqbalka. Nasiibka ugu fiican - Waxaan rajeynayaa inaan arko waxa DK New Media waa inuu keenaa Indianapolis iyo adduunka oo dhan!
Jul 18, 2009 markay tahay 8:38 PM
Xaqiiqda ah in Compendium adeegsado codsigeeda u gaarka ah si ay u wadato istiraatiijiyad suuq geyn gudaha ah… oo ay weheliso koritaanka shirkadda… maahan mid aan caddayn ama niyad-jab ahayn Robby! Ma jiro shirkad SEO ah oo 'dammaanad qaadi karta' natiijooyinka - sidoo kale madalna ma sameyn karto! Waa sida dadweynuhu uga faa'iideystaan ​​barxadda muhiimka ah - waana halka aan ku caawin karo.
Mahadsanid Robby! Waan ku qanacsanahay taageerada marwalbana waan qadarinayaa in aan helo qof daryeela oo igu filan si uu waqtiga u qaato oo uu iigu tartamo waqti ka waqti. Xitaa markaad inta badan khaldan tahay! (kaftan).
Jul 18, 2009 markay tahay 2:09 PM
waxay u egtahay go'aan adiga wax kuu tareysa n Compendium laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa kobcinta warshadaha Indianapolis
Jul 18, 2009 markay tahay 8:39 PM
Taasi waa waxa labadeenaba aan eegayno inaan sameyno, Nat!
Jul 18, 2009 markay tahay 7:37 PM
Hambalyo Doug! Durba waad kufiicantahay jidkaagii!
Jul 18, 2009 markay tahay 8:29 PM
Waxaad tahay ninka. Sii wad!
Mahadsanid Kyle! Waxaan rajeyneyaa inaan kulashaqeeyo dhowr shirkadood!
Jul 18, 2009 markay tahay 8:31 PM
Hambalyo! Xaqiiqdii waxaan rajeynayaa inaan kula shaqeeyo madaama labadeenaba aan kaligey kalideyno!
Jul 18, 2009 markay tahay 9:15 PM
Bravo, Doug. Waxaan kuu rajeynayaa guul aad u weyn dhammaan howlahaaga.
Jul 19, 2009 markay ahayd 3:47 AM
Doug, Waxaan kuugu hambalyeynayaa dhaqaaq. Waxaad noqon doontaa wax aan ahayn guul la yaab leh. Jascha
Jul 19, 2009 markay ahayd 8:11 AM
War weyn Doug! Waan kugu hambalyeynayaa go’aankaaga. Waxaan rajeyneynaa inaan maqlo sheekooyin badan oo guuleysta.
Jul 19, 2009 markay tahay 12:56 PM
Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno howshaada cusub!
Jul 19, 2009 markay tahay 4:34 PM
Waxaan kuugu hambalyaynayaa howshaada cusub! Ma u baahan tahay caawimaad dambe? Waxaan jeclaan lahaa inaan wax badan ka barto suuqan oo aan u shaqeeyo shirkad diyaar u ah inay qatar gasho oo ay ku sii tiirsanaato tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay.
Jul 20, 2009 markay ahayd 2:14 AM
Waxay u egtahay fursad qaali ah adiga iyo Compendium. Nasiibka ugu fiican wax walba! Waan ogahay inaad ka tuuri doontid jardiinada. Tag hel em DK!
Jul 20, 2009 markay tahay 1:50 PM
Doug post weyn! Sidaad hadda aragto, waxaa jira baahi weyn oo aan la daboolayn oo ka caawisa ururada dhammaan noocyadooda inay bartilmaameedsadaan ROI iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Waxaad leedahay awood gaar ah oo aad ku bari karto shirkadaha sida ay u noqon karaan xubno wanaagsan oo bulshada ka mid ah oo lacag badan ka heli karaan. Guuleysta Win
Jul 20, 2009 markay tahay 2:40 PM
Ma jiraan hogaamiyeyaal aad u tiro badan oo halkaa jooga oo dhiiri gelin kara shaqaalahooda sidan oo kale. Runtii aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaan taageeradiina sanadihii la soo dhaafay. Waxaan rajeyneynaa guul aad u badan mustaqbalka!
Jul 20, 2009 markay tahay 2:14 PM
Waxaad ku garaacday ciddiyaha madaxa Doug. Waxaan u maleynayaa inaad heshay suuq aad u fiican, iyo moodeel ganacsi oo dhawaq leh. Sii wad shaqada weyn.
Hambalyo Doug. Midigta luuqdaada. Waxay u egtahay guul-guul adiga iyo compendium.
Nov 23, 2009 saacadu markay tahay 3:28 PM
Mahadsanid Martine! Compendium aad ayuu u fiicnaa bilooyinkan. Ma jirin awood aan ku awoodi lahaa inaan sameeyo iyaga la'aantood.
Jul 20, 2009 markay tahay 3:54 PM
Waxaan kuugu hambalyaynayaa samaynta boodboodi, Doug. Habkaaga ganacsi waa mid aad u horumarsan waana mid aan maqlo dad badan oo ka hadlaya, sidoo kale.
Maraqaaga sirta ahi waa awooda aad ku dari karto qiimaha wax kasta oo aad taabato, sidaa darteed shaki iigama jiro inaad sii wadi doontid inaad sidaas ugu sii sameyso si toos ah ganacsigaaga.
Jul 20, 2009 markay tahay 4:07 PM
Tani runti waa mid xiiso u leh Indy, iyo annaguba (Squish) sidoo kale. Waxaan kuugu hambalyeynayaa samaynta quuska iyo mahadnaq ku aaddan Chris si uu kuu taageero!
Nov 23, 2009 saacadu markay tahay 3:27 PM
Mahadsanid Nicki! Ganacsiguna small yar yar already durba wuu socdaa.
Jul 28, 2009 markay tahay 8:36 PM
Hi Doug, koritaankaaga iyo guushaadu waa wax qurux badan. Waxaan kuu rajeynayaa farxad iyo guul. Waad ku mahadsan tahay dhiirigelin
Waad ku mahadsantahay qoraalkaaga wanaagsan, Jim! Weli waxaan u baahanahay inaan shakhsi ahaan taabto oo aan balaariyo barnaamijkaaga wax ku qorida.
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 6:08 PM
War yaab leh, Doug. Waxaan kuugu hambalyeynayaa hambalyo iyo bogaadin ku wajahan howsha cusub. Rajeynaya daawashada waxyaabaha horumaraya.
Sep 19, 2009 at 4: 23 AM
doug, dhammaantood waxay bilaabeen inay macno ii yeeshaan hadda. u daa google si ay iiga caawiso inaan isku geeyo qaybaha. waad ku mahadsantahay isbarashada compendium. waan waalanahay kaliya waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qaab aan ku awoodo degelkeyga!
Sep 19, 2009 at 4: 43 AM
Jenny, waa wax walba oo ku saabsan kharashka ka soo horjeeda dakhliga aad ka heli karto. :) Waxaa laga soo diray Verizon Wireless BlackBerry